Himalaya Dainik » हजुरको मोबाइल हरायो ? यसरी गर्नुहोस उजुरी !
हजुरको मोबाइल हरायो ? यसरी गर्नुहोस उजुरी !
आजभोली मोबाइल फोन नबोक्ने मान्छे त दुई–तीन वटासम्म मोबाइल सेट बोकेर हिँडेको देखिन्छ । अत्याधुनिक प्रविधिका स्मार्टफोन बोक्नु सामान्य जस्तै भइसक्यो ।
मूल्य पर्ने भएकाले बिक्री गर्ने उद्देश्यले व्यक्ति वा गिरोहले नै पनि भिडभाड सवारी साधन तथा एकान्तमा भेट्दा लुट्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।
यसरी हराएका, चोरिएका वा लुटिएका मोबाइलहरु आखिर जान्छन् कहाँ ? भेट्ने चोर्ने वा लुट्नेले आफै चलाउँछन् या बिक्री गर्छन् ? भने कुन माध्यमबाट गर्छन् ? त्यस्ता सामानका ग्राहक कस्ता हुन्छन् ?
हराए वा चोरी भएमा उजुरी गर्ने प्रकृया के कस्तो छ ? उजुरी गरेपछि भेटिने सम्भावना कत्तिको छ कति समय लाग्छ प्रकृया झण्झटिलो छ भन्ने लाग्नसक्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने एक महिनामा कम्तीमा एघार सयदेखि सोह्र सयसम्म मोबाइल हराएको रेकर्ड छ । यो तथ्यांक महानगरीय प्रहरी परिसरको मोबाइल खोजतलास शाखामा रीतपूर्वक आएका उजुरीहरुको मात्र हो ।